Fampianarana: mandry an-driran’antsy ny mpianatra | NewsMada
Fampianarana: mandry an-driran’antsy ny mpianatra
Tsy mitombin-tsaina ny mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana manomboka amin’ny herinandro. Tsy tafatombina na ny ray aman-dreny aza manoloana ny safotofoto eo amin’ny fampianarana amin’izao fotoana izao.
« Na eo aza ny fampitoniana sesilany ataon’ny fanjakana, mandry an-driran-antsy ihany ny tena ny amin’ny hoavin’ireo zanaka atsy ho atsy », hoy ny renim-pianakaviana iray mampiana-janaka amin’ny EPP.
Efa telo volana tsy nianatra ny ankizy mpianatry ny EPP sy CEG ary lycée maro. Harenina ao anatin’ny roa herinandro monja anefa izay lesoka izay. Betsaka ny lesona tsy vita, tsy ampy ny famerenana.
Heverina hampidinina hanaraka ny lentan’ireo ankizy tsy nianatra ireo ny lentan’ny fanadinam-panjakana amin’ity taona ity. Tsy maintsy izay fandaharam-pianarana vita ihany no hanadinana.
Handringa, araka izany, ny fahaizan’ireo ankizy. Hanahirana ny hanarina izany amin’ny kilasy hiakaran’izy ireo na ho an’ireo hiatrika fanadinam-panjakana izany na ireo kilasy tsotra.
Anisan’ny mahatsiaro fatiantoka kosa ny mpianatry ny sekoly tsy miankina. Nilofo sy nanao izay ho afany hatramin’ny farany kanefa ampahany amin’ny fandaharam-pianarana ihany no hanadinana, indrindra ireo natao tany aloha.
Simba ny sain’ny mpianatra, na ny mpampianatra aza, sanganehana manoloana ny zava-misy. Terena tsy maintsy hampianatra kanefa tsy mazava ny hitondrana ny fampianarana.
Etsy andaniny, mitohy ny fitakiana ataon’ny sendikan’ny mpampianatra, manizingizina fa tery vaimanta ny ataon’ny fanjakana. Tsy handray anjara amin’ny fampandehanana ny fanadinam-panjakana izy ireo ary indrindra, tsy tompon’antoka amin’ny fahapotehan’ny zaza malagasy manoloana ny fanadinana vonjimaika.